Vaovaon'ny orinasa - magazine "Potato System"
Mety hampitombo ny fidiram-bolan'ny tantsaha ny fambolena ovy any amin'ny tanimbary atsimon'i Shina
Rosselkhoztsentr dia manoro hevitra ny mpamokatra ovy voa mba hanao fanadihadiana momba ny tuber
Fanondranana ovy voa avy any Scottish any amin'ny Vondrona Eoropeana
Any Rosia, hitombo ny faritra eo ambanin'ny ovy sy legioma amin'ny "borscht set".
Tena LOHATENY vaovao Vaovaon'ny orinasa
Amin'ny taom-baovao miaraka amin'ny birao vaovao: "Aogositra" dia nanamboatra efitrano ho an'ny Chuvash State Agrarian University
Ao anatin'ny fiaraha-miasa amin'ny Chuvash State Agrarian University, ny orinasa tamin'ny volana aogositra, tamin'ny fankalazana ny faha-90 taonan'ny oniversite, dia nampiditra efitranon'ny Departemantan'ny Fambolena, Fambolena, Fiompiana ary...
Ny karazana tongolo tsy mandatsa-dranomaso dia voatendry ho amin'ny loka malaza
Ny karazana tongolo vaovao Sunions, izay tsy miteraka ranomaso, dia voatendry ho an'ny Fruit Logistica Innovation Award, hoy ny tatitry ny vavahadin-tserasera AgroBusiness. Araka ny...
Tamin'ny taona 2021, ny FAS (Service Antimonopoly Federal) an'i Rosia dia nanao andiana fivoriana niaraka tamin'ireo rojo antsinjarany lehibe indrindra. Ny serivisy dia nanasa ireo mpivarotra hanamboatra ny mekanika ...
Ny orinasa "Aogositra" dia lasa mpikambana ao amin'ny tetikasa nasionaly "Labour Productivity".
Ny toerana famokarana Rosiana an'ny orinasa "Aogositra" dia tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny tetikasa nasionaly "Famokarana asa". Ao amin'ny orinasa "Aogositra-Alabuga" ao amin'ny Repoblikan'i Tatarstan, ny fampiharana ny fitsipika ...
Notolorana amboara « Sofina volamena » ireo orinasan’ny faritra izay nahazo vokatra ambony tamin’ny asany taorian’ny taom-pambolena. Notoloran’ny filoha lefitry ny...
Ny fampirantiana "YUGAGRO 2021" dia namerina ny hetsika ara-barotra tao amin'ny complex agro-industrial
Nanomboka ny 23 ka hatramin'ny 26 Novambra 2021, dia natao tany Krasnodar ny fampirantiana iraisam-pirenena faha-28 "YUGAGRO 2021". Niavaka indray ny fampirantiana YUGAGRO ...
Webinar "Fijerena ny aretin'ny ovy holatra"
Amin'ny 14 Desambra amin'ny 11:00, ny fantsona telegrama Agronomia dia hampiantrano webinar "Fijerena ny aretina holatra ovy". Hanatrika ny webinar ireo manampahaizana avy amin’ny Agro...
Nahatratra 1 tapitrisa taonina ny habetsaky ny varotra takalo zezika mineraly
Araka ny filazan'ny serivisy an-gazety an'ny Fikambanan'ny mpamokatra zezika Rosiana, hatramin'ny fiandohan'ny taona 2021, ny habetsaky ny varotra fifanakalozana zezika mineraly ao amin'ny St. Petersburg International Commodity ...
Prestige® dia vita any Eoropa indray. Tetika fampiharana vaovao: avo lenta, mahomby, mahasoa
от Alexander Skvortsov
Alexander Skvortsov, lehiben'ny ovy, SumiAgro Ny vanim-potoanan'ny taona 2021, toy ny teo aloha, dia hotsaroan'ireo mpamboly ovy Rosiana izay tsy manana toetrandro tsara indrindra ...
Fanombohana ny naoty "Leaders of deep grain processing 2021"
Ny Association of Enterprises of Deep Processing of Grain sy ny gazetiboky federaly "Agrobusiness" dia manambara ny fanombohan'ny tetikasa iray hananganana salan'isa orinasa amin'ny indostrian'ny ...
P. 1 amin'ny 7 1 2 ... 7 Next.
Sambany atao any Rosia ny fivorian'ny Fikambanan'ny Fikambanan'ny Tantsaha Iraisam-pirenena
Any Etazonia dia misy fivoarana ara-tantara amin'ny vidin'ny sakafo